Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : hanimpitoloha
Entry hanim-pito loha (hanina, fito, loha)
Malagasy definition sakafom-panasana misy karazany maro [Rajemisa 1985]
English translation used in describing a feast where every kind of food desired is to be had. [Richardson 1885]
Rabetokotany: Hanim-pito loha
Examples Henakisoa menafify, henomby matavy noritina, akoho na vorona natao ladobo, miaraka amin' ny lasosy sy lasary, ary faranana amin' ny mofomamy sy voankazo, ireo rehetra ireo no nasesy hanina, mba hahatonga lafatra ny hanimpitoloha araky ny fitenenana. [Rakotozafy: Ratsimba, page 107]
Entry Hanim-pito loha
Author Rabetokotany Jean-Baptiste, 1914
Publishings Pages: 96.
Vocabulary Literature: books
Resak'olo-miaotra, dia izany Raveniavona sy Rasoanatra. Dinidinika ambany tafontranon rizy miaotra, fa sendra avy antoandro ny orana tamin'izay, ka naharitra sahabo ho adiny iray sy sasany.
Ramatoa Ravoniavona dia zazavavy fatra-pitia itony fantezy, " ka nony nahita ny zipo jobolavan-dRasoanatra, dia tsy naharitra fa rafitra niteny hoe: "Tsy mba tiako intsony, Rasoa, ny didy malalaka hoatra itony" , sady noraisiny avy eo amin'ny moron-tongony ilay zipo nihantona, nosokafany, dia narahiny teny hoe: "Oadray! kitapo mahalany vary roa sy tapany: tsy hoatra ny milatsaka io an-kitapo miakanjo an'io?
- Ireny ihany kosa ny ahy no tiako, hoy Rasoanatra, fa tsy hisy hanaovako dia faingana raha tratr'orana an-dalana aho; sady izaho koa maika lava; izany raha mamonjy lamesa merika andro ange!
- Ka tsy aleoko ihany, Rasoa, ny lamaody tanora, hoy Ravony, sady haingo no tohan'aina. Ny tongotra koa mateti-pamindra, tonga amin'ny hiran'ny taloha hoe: " Afindrafindrao ny tongotrareo " .
- Haingam-pamindra tratry ny miadana anie, hoy Rasoa niteny moramora, ny tongotra voagejan'ny fantezy e. Mateti-pamindra tsy lasan-davitra. Mahavizaka indray mahamasa-bary.
- He, ianao ity Rasoa, hoy ihany Ravony. Malalaka ny arabe hidolana. Koa raha tsy ketrina ka hidoboka an-jipo mifafa arabe; sanatrian'izany, toa vorontsiloza manjoretra tsy mahazaka elatra. Tsy aleoko mavitrika hoatra ny kavaliry.
- Afindrafindrao àry ny tongotrareo, hoy Rasoa, hoteriteren' ny fantezy. Nefa tandremo ny " epo " akaiky vao re, sao manao afindrafindrao mampitrotrongy.
- Ngaha izany, Rasoa, no hevitry ny hoe: Afindrafindrao, hoy Ravony, fa tsy hoe: Afindrafindrao hidolana!
- Ka midola atahoran-ko potraka anie, hoy Rasoa, raha izany e! ... Midola anaty arabe tsy mba manan-java-mahamaika tokoa àry ianareo, fa ny hobikain'ny olona ihany no tadiavinareo. Ny anay kosa hairizay nahasivilize ny tany izay, dia efa nahodinay ny Afindrafindrao. Afindrafindrao ny tongotrareo, hoy izahay, hana-tanteraka ny adidy momba an'Andriamanitra sy ny fanjakana ary ny namana.
- Ity Rasoa indray no fatratra, hoy Ravony saiky voa kelin' ny henatra, hoatra ny mifanohitra amin'ny fanjakana iny ny afindrafindraonay. Koa ny nanaovan'ny mpitondra ny arabe hamindrafindrana hidolana, ka ovanao amin'izay atsy sy ary indray!
- Aoka itsy, Ravoniavona, hoy Rasoa, fa na inona na inona filazanao tsy hahavitan-draharaha hoatra ny akanjo tsy manery tonon-taolana na oviana na oviana ny akanjo manery tonon-taolana. Jereo, na miaramila, na mpiasa, na mpanao taozavatra, raha misy manao ireny fitafiana tsy azo iketrahan-drantsam-batana ireny. Koa izany no anaovako hoe: Afindrafindrao ny tongotrareo ho lavo raha voan'ny " epo " tsy ampoizina ko.
- He! ianao ity, Rasoa, hoy Ravony, tsy tsara ka ho lamaody. Ataoko ity "izay vao tsy manitra no ratsy" . He irony fihetsiky ny vahoaka rahefa milaza ny afindrafindrao ny mpanao hira gasy. Izao manko efa novany izy io, ka naholany hoe: " Iroy a! i Lala re" !
- Anareo ho anareo ihany ny Iroinareo sy ny Lalanareo, hoy Rasoa tsy naka sarotra, fa ny anay, afindrafindrao amim-pitafiana ahazoana manaram-po am-pihetsehana. Vitanay avokoa, na dingan-dava na hazakazaka. Haingana ery ny hahatanterahana ny adidy; na ho an'ny fanahy, na ho an'ny nofo. Ny anay, ny nanaovana ny arabe dia ny mba hahazoana mandeha faingana tsy ho voasampontsampona amin'ny fanaovana ny adidy.
- Aoka re izay, fa misy azy izay ny ao aminay. Efa voavoa Ravony tàmin'izay.
- Koa ny orana mbola avy, hoy Rasoa, ka ho aiza s.ahady ianao? Ngaha dia olona adala Randria vadinao, tsy ho fantany fa avy ny orana, ka tafajanona taty aminay ianao?
- Efa misava ny vodilanitra atsimo, hoy Ravony efa te-hiala, ka ndeha hody aho fandrao avy be indray.
- Ity àry, hoy Rasoa, ny elo ento; nefa tandremo sao lavo fa malama ny lalana; sady teritery ihany ity akanjonao fantezy. Sa havelanao iny, fa itsy ahy malalaka no hoentinao?
- Nday'ty tokoa ny anao no hoentiko, Rasoa, hoy Ravony, fa rahampitso hampanateriko, sady hampanalaiko ny ahy.
Saikatra ery Ravoniavona nanala ny akanjony iray ambainy hitondra ny an-dRasoa efatra ambainy. Nefa mafy ny ady, sady tsy maintsy hody, ka nody tsy nihevitra ny resaka vao nifanaovana teo. Dia nandray ny elo handeha.